[05 / 12 / 2019] I-Bursa Uludağ i-Cable Car Fee Hlela Ukusebenza Kwamahora Nezimali Zokupaka Imoto 2019	I-16 Bursa
IkhayaTURKEYI-Mediterranean Mediterranean Coast33 MersinMersin, Railway and Airport to Gear Up
14 / 11 / 2019 33 Mersin, I-Mediterranean Mediterranean Coast, sesitimela, JIKELELE, Izikhumulo zezindiza, Highway, HEADLINE, TURKEY
ujantshi wesitimela kanye nezindiza
Mersin, Railway and Airport to Shift Up; IMeya yaseToroslar Atsız Afşın Yılmaz, ophinde abe nguMongameli weNhlangano Yezengqalasizinda yaseMersin naseSifundeni Sakhe Esizungezile, uthe bathokozile kakhulu ukubona ukuthi kutshalwe imali uMersin iminyaka emele uHlelo LoMongameli Lonyaka we-2020 eshicilelwe kuGazethi Esemthethweni.
I-2020 Year President's Programme macroeconomic and organisation organisation, yabe isithi ukuqaliswa kokusetshenziswa kwalezi zinto ze-Yilmaz Yilmaz, izinyathelo zohlelo esikhumulweni sezindiza saseCukurova, Yenice Logistics Center kanye nokuxhumeka echwebeni kojantshi kuyasebenza.
11. Isikhumulo sezindiza i-Çukurova, nayo efakwe ohlelweni lokuthuthukisa, kumenyezelwe ukuthi iqediwe kanti nokuxhumana kuzothuthukiswa.IMeya uYılmaz ikhumbuze ukuthi ukugcwalisa isikhumulo sezindiza i-rukurova kuzophothulwa ukubhekana ne-Middle East kanye ne-Afrika coğraf ohlelweni lwe-2020 lweHhovisi likaMongameli. Ngokuvumelana nalokhu, iMeya yaseToroslar u-Atsız Afşın Yılmaz wathi izinga lokuqashelwa ngokomzimba kwe-65 lizofinyelelwa emisebenzini yengqalasizinda eqhubekayo ye-Çukurova Airport kanye nezakhiwo ezinamandla kakhulu zizonikezwa umkhawulo wePublic-Private Cooperation (PPP). ugcizelele ukuthi kuzofaka umnikelo obalulekile. Mersin, ngemva Istanbul, ukuhweba ngobukhulu Nakuba edolobheni eTurkey; imikhakha esebenzayo; imboni, izinto zokudla, ukudla kwezolimo kanye nezokuvakasha emkhakheni wokusheshiswa okufanele kokudluliselwa kukaMongameli Yilmaz, wagcizelela ukuthi isikhumulo sezindiza sizosetshenziswa ukufaka umthelela kwezinye izinto ezitshaliwe ezitshaliwe.
IMeya Yilmaz, futhi no-Adana-Mersin 3. kanye ne-4. Iphrojekthi yokuxhumanisa i-Railway Line Construction neCukurova Airport imemezele ukuthi kuzoqala umsebenzi wokwakha. Ngale ndlela, umgwaqo wesitimela waseKonya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ngokugcwalisa imikhakha yezimboni yezokukhiqiza yamachweba e-Adana, Mersin nase-Iskenderun kuzoba lula ukuchaza uMongameli Yilmaz, imikhakha ebalulekile okufanele igxile ekwakhiweni okukhona nokuqhubekayo kwezikhungo zezinto zokuphakamisa amazinga aseMersin (Yenice) Logistics Center izovulelwa ibhizinisi, kusho yena.
Ukuveza ukwaneliseka kwabo ukuthi ukutshala imali uMersin abesekulinde iminyaka kuzofezeka e2020, iMeya uYılmaz yengeze nokuthi bazosebenzisana ukusiza intuthuko yedolobha.
New Silk Road Turkey luyokhula!
I-Kocaeli Gears Phezulu Ezokuthutha
Isikhumulo sezindiza i-Çukurova sitholakala…
3. Igama lesikhumulo sezindiza yiRecep Tayyip Erdoğan…
I-3 isuka esikhumulweni sezindiza i-DHMİ Atatürk. Ukuthuthela esikhumulweni sezindiza…
I-Ataturk Airport, i-World Best 3. Isikhumulo sezindiza esikhethiwe
3. Igama Lesikhumulo Sezindiza Laba Isikhumulo Sezindiza sase-Istanbul
I-44 Bin esikhumulweni sezindiza i-Atatürk, Istanbul…
E-Atatürk e-Istanbul Airport Passenger Number…
Umklomelo Wezindiza 'Wonyaka'
Isikhungo saseKonya Logistics kanye nesitimela saseKonya-Mersin…
Isitimela seMersin sixhuma olwandle lwakho olumnyama
Isaziso sethenda: Adana-Mersin Railway Line Ukwakhiwa…
Adana-Mersin Railway Line ukwakhiwa kwemisebenzi…
I-4.International Travelexpo Tourism and Travel Fair Held e-Ankara
Star of Logistics Shines nge-Startups
Saxhuma iMedithera kanye ne-Aegean ngemizila
IBşkent Ankara Ilungele Ubusika
Ama-Dacia Ukunikeza Amathuba Ahehayo ngoZibandlela nge-Zero Inzuzo
Amaloli we-Ford 2 Umemezela Ukuthengisa Izimoto ze-1000 eRomania